सरकारले १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ । मुलुकमा सार्वजनिक बिदा बढी भयो भनेर विरोध भइरहेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिदा कटौतीको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख १ गते मुगुको रारा तालबाट देशवासीका नाममा पहिलो औपचारिक सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री भएपछि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन छ । ओलीले अहिलेसम्म औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् ।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरु हेममणि सुवेदी तथा नारायण खरेलले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो ।
एक साताअघि मात्रै मलेसियाबाट काठमाडौं फर्किएका थमबहादुर रोकालाई उनका कान्छो भाइ धर्मलालले आफू पनि दसैंमा जसरी भए पनि फर्किने बताएका थिए । ‘म दसैंमा आउँछु, त्यतिन्जेल घर गएर तपाईंले बुबाआमालाई हेर्नुहोला,’ साइँला दाइ थमबहादुरलाई कान्छाले भनेका थिए । धर्मलाल आफूले भनेको भन्दा निकै अघि बुधबार नै काठमाडौं आइपुगे तर बाकसमा बन्द भएर ।
स्थानीयबासिन्दाले भारतले सीमा नदी महाकालीमा एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेका ३ वटा काठेपुल भत्काइदिएका छन् । गत फागुनमा भारतले नेपालको अनुमतिबिना ब्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङस्थित महाकालीमा अस्थायी प्रकृतिका काठे पुल निर्माण गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षणका सम्बन्धमा युरोपेली संघले दिएको प्रतिवेदन सर्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुटनीतिक समुदायलाई सरकारका प्राथमिकताबारे जानकारी दिँदै राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । विगत केही वर्षदेखि ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनाएका ओलीले सरकारका सम्हालेको पहिलो कुटनीतिक सम्बोधनमा राष्ट्रियतालाई पहिलो नम्बरमा किन राखे ?
एसईई परीक्षार्थी गोरीकला रोकायाको हत्यामा प्रहरीको पनि संलग्नता रहेको रहस्य खुलेको छ । प्रहरीले हत्या आशंकामा अस्थायी ट्राफिक पोष्ट बाबियाचौरमा कार्यरत हरि कोइरालासहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि भएको हो ।
पोखराबाट नारायणघाटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा घाइते भएका १० जना उपचार भइरहेकाे छ भने एकजनाको मृत्यु भएकाे छ ।
बुधबार बिहान सिद्धिचरण लोकर्माग अन्तर्गत कटारी घुर्मी खण्डको गहुबारीमा आज बिहान ट्यांकर दुर्घटना हुदाँ चालकसहित दुईको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी तीन जना घाइते भएका छन् ।
चन्द्रपुर नगरपालीका–५ स्थित ४ वटा पसलमा बुधवार आगलागी भएको छ । बिहानदेखि सुरु भएको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रण्मा आएको छैन । आगो निभाउन ५ वटा वारुणयन्त्र परिचालन गरिएको छ ।
मनहरी गाउँपालिका–७ रमौलीकी सरस्वती बर्तौलामाथि आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । सोमबार बाघको आक्रमणमा बर्तौलाको मृत्यु भएको थियो ।
गोदावरी नगरपालिका–१२ ओलानीकी ७५ वर्षीया जौमती विक एचआईभी संक्रमित नातिको उपचारका लागि एआरटी लिन प्रत्येक महिना धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल धाउँछिन् ।
महिना दिनअघि मात्रै रिलिज फिल्म ‘कृ’ मा प्रयोग गरिएको गीत ‘उकालीमा पछि पछि...’ चोरी गरेको आरापेमा उक्त फिल्मका निर्मातामध्येका एक सुवास गिरीलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पराम्परागत रूपमा शक्तिशाली देवी नुवाकोट भैरवीको खट (रथ) बोक्दै आएका लच्याङका गुठियारले गत वर्षझैं यसपटक पनि खट नबोक्ने भएका छन् ।
उपत्यकाका ७ स्थानमा दस वर्षपछि ‘स्मार्ट ट्राफिक’ बत्ती बल्न थालेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकाले मर्मत तथा नयाँ जडान गरेर महाराजगन्जस्थित नारायणगोपाल चोक, सोल्टी मोड, नयाँबानेश्वर चोक, पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा मंगलबार लाइट राखिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल संसद्मा पेस नगरे पुन: सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंँग नेपालले मूलत: विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै घुुमाउरो तरिकाबाट संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दामा भने धेरै चासो नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालगन्जमा सम्पन्न १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ । पराजुली साउन २१ गतेदेखि नै पदमा नरहेको दाबी गर्दै पेस भएको निवेदनलाई अस्वीकृत नगर्न सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रारलाई आदेश दिएको हो ।